Social Media Marketing | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Posted on January 7, 2018 by MYEO in Local, Training //0Comments
Deadline : Apply Now (before 20 January 2018)
Location : London Business Academy, Block-4, Unit-12, Mingalar Mandalay, Mandalay
Duration : 20, 21, 27, 28 January 2018 (Every Sat & Sun, 12 to 5:30 PM) (Total 20 Hours)
Type : Self Funded
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြော်ငြာ တွေအတွက် Billboard တွေ ပဲ ထောင်နေတုန်းလား?Facebook လို Social Media တွင် စတင်ကြော်ငြာဖို့ အခက်တွေ့နေလား?Social Media Marketing ကို မိမိ လုပ်ငန်းတွင် စတင်အသုံးချ ဖို့စဉ်းစား နေပြီလား? မိမိ ရဲ့ Targeted Market ကို Social Media Marketing Kits တွေနဲ့ ထိုးဖောက် ဖို့ စဉ်းစား နေပြီလား- ကုန်ကျ စရိတ် အနည်းဆုံးနဲ့ အထိရောက် ဆုံး Marketing လုပ်ရန် ဒီ သင်တန်း မှာ အဖြေရှာလိုက်ပါ။”Certificate in Social Media Marketing” , London Business Academy, Mandalay Campus တွင် January 20 ရက်နေ့စမည်။၂၀၁၈ Digital ခေတ်မှာ သင့်စီးပွားရေး ပိုပြီးတိုးတက်လာအောင် အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးပြီလား? သို့မဟုတ် Social Marketer တစ်ယောက် အနေနဲ့ သင့် Career ကို လျှောက်လှမ်းဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား?သင့်လိုပဲ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ၃၀% ကျော် Facebook (Social Media) သုံးနေကြပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများက Facebook (Social Media) မှာ ကြော်ငြာရတာ အင်မတန်အကျိုးရှိကြောင်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူ Facebook မှာ Page စဖွင့်ပြီး အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ လေ့လာကြရအောင်။ယခင် KFC Myanmar ရဲ့ Digital Marketer, Page Admin နှင့် ယခု Samsung Myanmar ဧ။် Digital Marketing Manager ဖြစ်တဲ့ ကိုဇင်ဆက် ကနေပြီး ကူညီပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
– Youtube စသည့် Platform ၃ခုကို အခြေခံသင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
– စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုခု လုပ်ကိုင်နေသူ (သို့မဟုတ်)
– လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်)
– Digital Marketing အား လက်တွေ့ အသုံးချ လုပ်ကိုင်မည့်သူ ဖြစ်ရမည်။
– Laptop တစ်လုံး ယူဆောင်လာ ရမည်။
– Attendance 100% ရှိမှ သာ London Business Academy မှ Certificate ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။
– Social Media Platforms များဖြစ်ကြသည့် Facebook, Youtube, Instagram စသည်တို့တွင် သင်ဧ။် Product များအား Marketing စတင်လုပ်နိုင်လာမည်။
– Facebook Ads Manager, Power Editor, Creative Hubs စသည်တို့အား စတင်အသုံးချလာ နိုင်မည်။
– Social Marketer တစ်ယောက် အနေဖြင့် မိမိဧ။် Career ကို စတင်နိုင်မည်။
– မိမိ Business အား ၂၀၁၈ Digital ခတ်တွင် Social Media ကို အသုံးချကာ Sales (ရောင်းအားများ) တိုးတတ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
Application Process: Please contact 09765000016 for registration.
For more information, please visit Official Announcement
စီးပှားရေး လုပျငနျးကွျောငွာ ​တှေအတှကျ Billboard တှ ပဲ ​ထောငျနတေုနျးလား?Facebook လို Social Media တှငျ စတငျကွျောငွာဖို့ အခကျတှနေ့လေား?Social Media Marketing ကို မိမိ လုပျငနျးတှငျ စတငျအသုံးခြ ဖို့စဉျးစား ​နေပွီလား?မိမိ ရဲ့ Targeted Market ကို Social Media Marketing Kits ​တှေနဲ့ ထိုးဖောကျ ဖို့ စဉျးစား ​နေပွီလား?ကုနျကြ စရိတျ အနညျးဆုံးနဲ့ အထိရောကျ ဆုံး Marketing လုပျရနျ ဒီ သငျတနျး မှာ အဖွရှောလိုကျပါ။”Certificate in Social Media Marketing” , London Business Academy, Mandalay Campus တှငျ January 20 ရကျနစေ့မညျ။၂၀၁၈ Digital ခတျမှာ သငျ့စီးပှားရေး ပိုပွီးတိုးတကျလာအောငျ အဆငျသငျ့ပွငျထားပွီးပွီလား? သို့မဟုတျ Social Marketer တဈယောကျ အနနေဲ့ သငျ့ Career ကို ​လြှောကျလှမျးဖို့ စဉျးစားနပွေီလား? သငျ့လိုပဲ မနျမာတဈနိုငျငံလုံး လူဦးရရေဲ့ ၃၀% ကျြာ Facebook (Social Media) သုံးနကွေပါပွီ။ မနျမာနိုငျငံက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တျာတျောမြားမြားက Facebook (Social Media) မှာ ​ကွျောငွာရတာ အငျမတနျအကြိုးရှိကွောငျး လကျခံထားကွပါတယျ။ Facebook မှာ Page စဖှငျ့ပွီး အကြိုးရှိအောငျ ဘယျလိုအသုံးခရြမလဲဆိုတာ လ့လာကွရအောငျ။ ယခငျ KFC Myanmar ရဲ့ Digital Marketer, Page Admin နှငျ့ ယခု Samsung Myanmar ၏ Digital Marketing Manageွ ဖဈတဲ့ ကိုဇငျဆကျ ကနပွေီး ကူညီပွသပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
– Youtube စသညျ့ Platform ၃ခုကို အခွခေံသငျကွားမညျွ ဖဈပါသညျ။
– စီးပှားရေး လုပျငနျး တဈခုခု လုပျကိုငျနသေူ (သို့မဟုတျ)
– လုပျငနျး အတှအေ့ကွုံ ရှိသွူ ဖဈရမညျ။ (သို့မဟုတျ)
– Digital Marketing အား လကျတှေ့ အသုံးခြ လုပျကိုငျမညျ့သွူ ဖဈရမညျ။
– Laptop တဈလုံး ယူဆောငျလာ ရမညျ။
– Attendance 100% ရှိမှ သာ London Business Academy မှ Certificate ခြီးမွှငျ့မညျွ ဖဈသညျ။
– Social Media Platforms မြားဖွဈကွသညျ့ Facebook, Youtube, Instagram စသညျတို့တှငျ သငျ၏ Product မြားအား Marketing စတငျလုပျနိုငျလာမညျ။
– Facebook Ads Manager, Power Editor, Creative Hubs စသညျတို့အား စတငျအသုံးခလြာ နိုငျမညျ။
– Social Marketer တဈယောကျ အနဖွေငျ့ မိမိ၏ Career ကို စတငျနိုငျမညျ။
– မိမိ Business အား ၂၀၁၈ Digital ခတျတှငျ Social Media ကို အသုံးခကြာ Sales (ရောငျးအားမြား) တိုးတတျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျမညျ